एक महिना पनि नधान्ने कोरोना विरुद्धको स्टक सामग्री « Drishti News – Nepalese News Portal
एक महिना पनि नधान्ने कोरोना विरुद्धको स्टक सामग्री
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार 8:12 pm
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र फैलिरहेको छ । उपचारका लागि कतिपय अस्पतालमा ठाउँ नै छैन । आइसीयू नपाउँदा कतै अस्पतालको आँगनमै उपचार त कतै अस्पताल चहार्दा चहार्दै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरविरुद्ध लड्न कस्टक सामग्री रहेको दावी गरेको छ । तर, संक्रमण दर र सरकारको तथ्यांक हेर्दा सरकारसँग स्टकमा रहेको सामग्रीले केही दिनमात्र पुग्छ । स्थानीय सरकारले त अझ महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनै सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य सामग्री अभावमा भारतले चरम संकट भोगिरहेको छ । नेपालले त्योभन्दा ठूलो संकट भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
भारतले साता अघि नै अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाइसक्यो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न थालिसकेको छ । भारतमा कारोनाबाट दैनिक धेरैको मृत्यु भइरहेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नै पालना नहुँदाको यो अवस्थामा कोरोना संक्रमणले भयावह बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ । तर, सरकारसँग रहेको स्टक पुग्दो छैन । सरकारले औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री स्टकमा रहेको बताएपनि छिट्टै स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुने देखिन्छ ।
कुन स्वास्थ्य सामग्री कति स्टक ?
सेफ्टी चश्मा : ३५,७३१
पञ्जा : ३५,४४८
सर्जिकल मास्क : १०,६०,७६७
थर्ममिटर : ५१८
एन–९५ मास्क : १,०४,२५१
पञ्जा हेभी ड्युट : २११
फेस सिल्ड : २४,७५१
सर्जिकल हुड : ८००
सेनिटाइजर : १६०१७ लिटर
पीपीई : १,८९३
गाउन : ४५,८४३
सोडियम हाइपोक्लोराइड : ६५
गमबुट : ४,९६१
कानबाट जाँँच्ने थर्ममिटर : ८९
वाइप : २६३
भुइँ सफा गर्ने केमिकल : ६ सय ९ लिटर
क्लोरिन पाउडर : ५ सय कन्टेनर
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामग्री व्यवस्थापन महाशाखामा मौज्दात यि स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयअनुसार एक महिनाका लागि मात्रै हो । भारतबाट आयात हुने अधिकांश सामग्री भारतले रोक लगाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्टक बढाउन चुनौती थपिएको छ ।
सरकारी आकालनअनुसार एक महिनापछि संक्रमितको संख्या तीन लाखभन्दा बढी हुनेछ । त्यसैले हाल सरकारसँग मौज्दात कुनै पनि सामग्रीले नधान्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैंले खरिद गर्न सक्ने बाहेकका स्वास्थ्य सामग्री किन्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवा विभागले अघि बढाएको छ । तर, नजिकको बजार भारतबाट सामग्री खरिद गर्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा अन्य देशबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामग्री अक्सिजन हो । तर, नेपालमा अक्सिजनको अत्यन्तै न्यून छ । भारतबाट आयात हुने अक्सिजनमा रोक लागिसकेको छ । त्यसैले सबैभन्दा धेरै संकट अक्सिजन अभावमा हुने छ ।
कति स्टक छ अक्सिजन ?
देशभर निजी र सरकारी गरी ३० वटा अक्सिजन प्लान्ट छन्  । तर, एक सय २५ सरकारी अस्पतालमध्ये १६ वटामा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छ । त्यसमा पनि चार वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । एक वर्षअघिदेखि बिग्रिएका प्लान्ट अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले उपत्यकाभित्र टेकु अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पताल तथा थापाथली प्रसूतिगृहमा मात्रै प्लान्ट सञ्चालनमा छन् ।
कुन प्रदेशमा कति अक्सिजन प्लान्ट छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ८० प्रतिशत कोरोना संक्रमित सामान्य अवस्थाका हुन्छन् । १५ प्रतिशत लक्षणसहितका र पाँच प्रतिशत गम्भीर बिरामी हुन्छन् । तर, २० प्रतिशत बिरामीलाई कुनै पनि बेला अक्सिजन दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
कोभिडको कुनै औषधि छैन, गम्भीर बिरामीलाई अक्सिजन नै ‘लाइफलाइन’ हो । यसैबाट पनि पुष्टि भएको छ कि सरकार कहाँ कति चुकिरहेको छ ।